२१ बैशाख मेरो आमाको सिन्दुर पुछिएको यो दिन-शगुना शाह - Saptakoshionline
२१ बैशाख मेरो आमाको सिन्दुर पुछिएको यो दिन-शगुना शाह
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २१, २०७६ समय: ८:२८:००
२१ बैशाख शाहका लागि निकै दुखदायी दिन हो । आमाको सिन्दुर पछिएको दिन हो भने शगुना शाह टुहुरो भएको दिन हो । २१ बैशाखकै दिन आज आमाको मुख हेर्ने दिन परेको छ । शगुनाका लागि आमाभन्दा बाबुलाई बढि सम्झने दिन परेको छ ।
काठमाडौं । ‘मातातीर्थ औंसी’ बर्षमा एक दिन आउने यो दिन कसैका लागि खुसी ल्याउँछ भने कसैका लागि दु्ख । जन्म दिने र सवैभन्दा बढि माया गर्ने आमाको न्यानो काखमा पुग्नेहरु यो दिन रमाउँछन् । आमा नहुँनेहरु यो दिनलाई सम्झेर आँसु खसाल्छन् । यो दिनलाई सम्झने हरेक ब्यक्तिका हेरेक इतिहास होलान तर साहित्यकार शगुना शाहका लागि आमा भएर पनि यो दिन दुखदायी छ ।
शगुनाले यसरी सम्झिन यो दिन
आज भन्दा ३४ बर्ष अघि, बैशाख २१ गतेकै दिन मेरो बुवाले हृदयघातबाट ज्यान गुमाउनु भयो । कलिलै उमेरमा बुवाले ज्यान गुमाएपछि मेरो आमाको रगिन दुनियाँ सकियो । आमामा दुखको भारी एकातिर थियो भने अर्काेतिर बाबुको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भूमिका थपिएको थियो ।
आजको दिनसम्म पनि उहाँँको अदम्य साहस, कठिनाईसँगै पौठेचरी र अथाह ममताले मेरो बिचार बदल्यो । आमालाई जुनै उपमा दिएपनि मेरालागि अपूरो र फिक्का हुन्छ । मेरी आमा मात्र हैनन् बुवा पनि हुन ।
आधुनिक युगमा ध्यानको आवश्यकता
ध्यानको आवश्यकता आजको आधुनिक युगमा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको छ । ध्यान अर्थात होस, ध्यान अर्थात जागृत, ध्यान अर्थात आ...
यस्तो छ शैलेश विष्टले हार्ने केही प्रमुख कारण
इटहरी/ उधोग वणिज्य संघ इटहरीको गणना भइरहेको मत पारीणामले भिम बहादुर पौडेलले जित्ने लगभग पक्कापक्की भएको जस्तो देखिन्छ । ...
दलित र आरक्षण: विनोद परियार
कस्काे लागि आरक्षण के अारक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै छैनन र ? सलियाै देखि दलित काे नाम गरि खाेलियकाे आरक्षणमा किन ताण्ड...
कहिल्यै धनी बन्न दिंदैन यी ६ बानीले !
अर्बपति तथा विश्वका सफल मानिसहरुले आफ्नो सफलता पछाडिको कारणको रुपमा आफ्नो राम्रो आनीबानी पनि भन्ने गरेका छन् । सफलताको ए...
डिप्रेशनको कारण बन्दैछ सामाजिक सञ्जाल
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली माध्यम मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोग कर्ताहरु पनि प्रत्येक दिन बढिरहेका छन्...